Tuesday August 15, 2017 - 15:56:47 in Wararka by Xarunta Dhexe
Waxaa wakhti aan sidaasi usii fogayn garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laga soo dejiyey iyada oo Diyaarad khaas ah lagu sido ,Sheekh Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) Afhayeenkii hore ee kooxda Al Shabaab.
Mukhtaar Roobow Abu-Mansuur oo ay weheliyaan xubno ka tirsan dawlada ayaa soo gaadhay garoonka Aadan Cadde, waxaana si wayn loo adkeeyay amaanka garoonka iyada oo la diidan yahay in ay dadku arkaan Diyarada siday Mukhtaar iyo isaga laftiisaba.
Dad badan oo Somaliyeed ayaa aamin san in Mukhtaar Roobow iyo qayrkiiba aanay jirayn cid wax yeelaysaa,sababta oo ah waa rag si xoogle ugu tiirsan qabaa'ilka iyo reeraha ay ka dhasheen.
Waxa sidan oo kale isaguna wakhti hore isu soo dhiibay dawlada Xasan Daahir Aways oo ka mid ahaa asasayaashii ururadii kala duwanaa ee Somaliya ka hana qaaday,Xasan waxaa la odhan karaa waxa uu hada ku dangiigsanayaa(raaxaysanayaa) Guri wayn oo ku yaala magalada Muqdisho isaga iyo qoyskisiiba,iyada oo uu Xasan Daahir Aways uu ka mid ahaa horjoogayaashii iyagu dabka saaray kumaan kun oo dhalinyaro Somaliyeed oo ku lee'day dagaladii ujeedooyinka faraha badan lahaa.
Ilaa hada waxa ay dadyaw farabadan oo Somali ahi ay garan kali la'yihiin ,sababta hogaamiyaasha Al-shabaab marka la qabto ama ay isasoodhibaan qabiiloyinkooda iyo mamulada ay ka tirsan yihiin ay usoo galbeyaan sida madaxwaynaha,iyada oo dhalintii ay fikirka is-qarxinta ay ku beereena hadii la qabto ama ay isasoo dhibaan loo laynaayo.